ဦးနှောက်အားကောင်းစေနိုင်သော အစားအစာများ • Asia Royal Hospital
+95 1 538 055, +95 1 230 4999
CT-Scan and C-arm
8:00 AM – 8:00 PM Services
Cardiac Echo Service
Specialist OPD Service
Perfusion Scan Service
Stress Test Service
Holter ECG Service
NCS and EMG Service(Electromyography)
Lung Function Test Service
Home » ဦးနှောက်အားကောင်းစေနိုင်သော အစားအစာများ
အသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ မေ့တတ်လာခြင်းမှာ အိပ်ရေးမ၀ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း (သို့) လူနေမှုဘ၀ပုံစံနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကြောင်းကိစ္စများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အစားအသောက် ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရသူ အရေအ တွက် များပြားလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO)က မကြာမီက သတိပေးထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသူ ၄၇ ဒသမ ၅ သန်းရှိပြီး နှစ်စဉ်ထပ်မံဖြစ်ပွားသူ ၇ ဒသမ ၇ သန်းရှိသည်ဟု WHOက ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက် အားကောင်းစေနိုင် သည့်အစားအစာများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥတို့အပါအ၀င် ဥများတွင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးအာဟာရဓာတ်များ ပါဝင်သောကြောင့် ကျန်းမာရေးအကျိုး ကျေးဇူးများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ကြက်ဥအနှစ်တွင် ဦးနှောက်အ တွက် အရေးကြီးသော ဘီတာမင်ဘီဓာတ်ပေါင်းစု ပါဝင်သော ကြောင့် ရေတိုမှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အရေးကြီးသော အစားအစာဖြစ်သည်။
နေကြာစေ့တွင် ဗီတာမင်အီး ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သောကြောင့် မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်ချောမွေ့စေရန် အရေးပါသည်။ နေကြာ စေ့မှ ထုတ်ယူသော အဆီကိုလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်း အသုံးပြုနေကြ သည်။
ငါးတွင်ပါဝင်သော အဆီများသည် အိုမီဂါ-၃ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သောကြောင့် ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့အတွက် အရေးကြီးသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ငါးစားပေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်၏ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဆော်လမွန်ငါးနှင့် တူနာငါးတို့တွင် အိုမီဂါ-၃ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သည်။စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလက်ဘယ်ရီနှင့် ဘလူးဘယ်ရီအသီးများတွင် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးရှိသည်။
ဒေါက်ခွရွက်သည် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းအင် ပေးစွမ်းနိုင်သည့် အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စဉ်းစားတွေးတောမှု ဆိုင်ရာ ဉာဏ်ရည်လျော့ပါးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်သည်။
ဘီတွတ်မြစ်တွင် ဦးနှောက်သို့ သွေးစီးဆင်းမှုကို အားကောင်း စေနိုင်သည့် နိုက်ထရိစ်ဓာတ် ပါဝင်သောကြောင့် ဦးနှောက်လုပ် ဆောင်ချက်ကို အားကောင်းလာစေနိုင်သည်။
ဗာဒံစေ့၊ မြေပဲစသော အစေ့အဆန်များတွင် ဗီတာမင်အီး ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်သောကြောင့် ဦးနှောက်ကျန်းမာရေးအတွက် စား ပေးသင့်သည်။
သဘာဝဆန်၊ ဂျုံ၊ ပဲ၊ ပြောင်းတို့ စားပေးခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သွေးစီးဆင်းမှုကို အားကောင်းစေနိုင်သည်။
အနက်ရောင်ချောကလက်စားပေးခြင်းဖြင့်လည်း ခန္ဓာကိုယ် အတွက် ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဦးနှောက် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။
အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ၏၀န်ဆောင်မှုများအတွက် အာရှတော်ဝင်ဖုန်းနံပတ် – 01-538055 နှင့် 01-2304999 သို့ ၂၄/၇ မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်
အမှတ်(၁၄)၊ ဗဟိုလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပါတ် – ၀၁-၅၃၈၀၅၅၊ ၀၁-၂၃၀၄၉၉၉။
“ကလီစာစားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ဘေးအန္တရာယ်များ”
“ပြေးခြင်းက ကယ်လိုရီတွေကို ဘယ်လိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်သလဲ?”
အသည်းရောင် အသားဝါစီရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ
About asia royal hospital
© Copyright 2018. All Rights Reserved. Powered by Ideal Technology.